Rick and Morty: Pocket Mortys 2.11.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.11.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Rick and Morty: Pocket Mortys
Rick and Morty: Pocket Mortys ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကတော့ galaxy အတွက် Simulator ကိုတိုက်ခိုက်နေအဆိုပါ # 1 ဘက်ပေါင်းစုံမြေးပြန်အစဉ်အမြဲထက်ပိုကောင်းပါ!
သငျသညျက Rick Sanchez, လူတိုင်း၏အနှစ်သက်ဆုံးမတည်မငြိမ်ပါရမီပါပဲ။ နက်နဲသောအရာတခုကို Rick တစ်ပေါ်တယ်ထဲကပေါ်လာနှင့်သင့်အသက်တာကို့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေသည့်အခါသင်သည်သင်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ Morty မှာအော်ဟစ်ပါတယ်။ သူသည်သင်တို့ Morty စုဆောင်းနှင့်တိုက်ခိုက်နေသည့် multiverse အတွက်အပူဆုံးအသစ်သောလမ်းကြောင်းသစ်ကြောင်းတွေ့ရှရှိရာတစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအတိုင်းအတာ၌သင်တို့ကိုစုပ်ယူထားသော! တချို့ကပိုပြီးပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်ပျက်နှင့်ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းကိုအတို Rick ၏ကောင်စီသည်သင်၏ပေါ်တယ်သေနတ်ကြာပါသည်။ အခုဆိုရင်သင် multiverse ဖြတ်ပြီး Rick အနိုင်ယူနှင့်ပြန်ရရှိရန်တံဆိပ်များစုဆောင်းရန်ရှိသည်။
ကောင်းသောအရာ, သင်သည်ဖမ်းယူလေ့ကျင့်နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့မြေးဖြစ်သူ၏မူကွဲရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်! သင့်ရဲ့ Portal ကိုဂွန်နှင့်သင့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် Rick ပြီးနောက်ရစ်ခ်ကိုဆင်းယူအားကောင်းတဲ့နှင့်ကွဲပြားခြားနား Mortys နှင့်ခရီးသွားအတိုင်းအတာနှင့်သင်၏ Morty ကုန်းပတ်သီးနှံများကိုပုံ။
ရူးသွပ် Morty-based အရေးယူ:
• 300+ ထူးခြားတဲ့နှင့်ထူးထူးဆန်းဆန်း Mortys ။ ကျနော်တို့ Cronenberg Morty, Pickled Morty, မော်တော်ကား Morty နှင့်ထို့ထက် ပို. တယ်။
•ရထား, ပေါင်းစပ်, သင်၏စုံလင်သော Morty အလှဆင်ဖန်တီးရန် Mortys တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။
• multiplayer တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း & ရန်သူနှင့်အတူတိုက်ပွဲ & ကုန်သွယ်ရေး Mortys ။
•ရေရှည်တည်တံ့ Morty အသံရင်းမြစ်ထားတဲ့။
•ရဲ့ကဤ Mortys get ကြပါစို့
လုပ်ဖို့ကအခြား Non-Morty ဆက်စပ်ပစ္စည်းပစ္စယ:
•ကင်ပိန်းအတွက် multiverse ဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲ။
•အ Morty ဂိမ်းအတွက် Multi-tier စိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight ။
•ယာဉ်ပစ္စည်းများ, ပြည့်စုံဘက် Quest များ, သို့မဟုတ်သင့်စည်းစိမ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပါစေ။
Facebook မှာ - http://www.facebook.com/adultswimgames
တွစ်တာ - https://www.twitter.com/adultswimgames
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.games.adultswim.com
ဒီ app များအတွက်အသုံးပြုမှုများ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအငြင်းပွားမှုများဘို့ခုံသမာဓိတို့ပါဝင်သည် - http://www.adultswim.com/footer/legal/terms-of-use.html တွေ့မြင်
Rick and Morty: Pocket Mortys အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Rick and Morty: Pocket Mortys အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Rick and Morty: Pocket Mortys အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Rick and Morty: Pocket Mortys အား အခ်က္ျပပါ
andronexus စတိုး 95.1k 24.81M
Rick and Morty: Pocket Mortys ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Rick and Morty: Pocket Mortys အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.11.1
App Name: Rick and Morty: Pocket Mortys
လက်မှတ် SHA1: 60:B4:74:B6:7D:BF:43:D5:1D:76:C2:02:32:68:B1:D3:77:4E:53:E3
ထုတ်လုပ်သူ (CN): David Burpitt
အဖွဲ့အစည်း (O): Big Pixel Studios
Rick and Morty: Pocket Mortys APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ